रेयस मोन्फोर्टेका पुस्तकहरू, म्याड्रिडका लेखकको काममा हिंड्नुभयो वर्तमान साहित्य
जब एक इन्टरनेट प्रयोगकर्ता खोजी "रेज मोन्फोर्टे पुस्तकहरू" मा प्रवेश गर्दछ, प्राय: प्रायः नतीजा सम्बन्धित हुन्छ प्रेमको लागि बुर्का (२००)) यो घटना वास्तविक घटनाहरूमा आधारित छ - म्याड्रिडबाट जन्मेका लेखकले लगभग सबै पाठहरू जस्तै - विश्वव्यापी क्षेत्रको गतिशील कथा भन्छ। अचम्म मान्नुपर्दैन, यो उपन्यास सफलतापूर्वक एन्टेना channel च्यानलले सानो स्क्रिनमा रूपान्तरण गर्‍यो।
थप रूपमा, यो स्पेनिश पत्रकार र लेखक को लागि उपन्यास इतिहास को लागी Alfonso X पुरस्कार पनि प्राप्त भयो एक रूसी जोश (2015)। आफ्नो पहिलो पुस्तक प्रकाशित गर्नु भन्दा पहिले मोनफोर्टे स्पेनिश श्रोता र दर्शकहरूको बीच लोकप्रिय थुप्रै कार्यक्रमहरूको कास्टको हिस्सा थियो।। ती मध्ये, एल मुन्डो टिभी, पागल देश (ओन्डा सिरो) र, अवश्य पनि, सात चन्द्रमा (रेडियो पोइन्ट)
1 रेस मोन्फोर्टेको बारेमा केहि जीवनी जानकारी
2 प्रेमको लागि बुर्का (२००))
2.1 एक साँचो कथा को शुरुवात
3 क्रूर प्रेम (२०० 2008)
4 हिडन गुलाब (२००))
5 अविश्वासनीय (२०११)
6 बालुवा चुम्बन (२०१ 2013)
7 एक रसियन जुनून (२०१ 2015)
8 रेस मोन्फोर्टेको सबैभन्दा भर्खरका पुस्तकहरू
रेस मोन्फोर्टेको बारेमा केहि जीवनी जानकारी
रेयस मोन्फोर्टे (१ 1975 XNUMX)) माद्रिद, स्पेनमा जन्म भएको थियो जहाँ उनी आफ्नो पत्रकारिता कार्यको लागि परिचित छन्। उनले रेडियो स्पेक्ट्रममा लुइस डेल ओल्मोको कम्पनी प्रोटोगेनिस्टासमा कम्पनीबाट आफ्नो क्यारियर शुरू गरे। त्यस बेला देखि उनी इबेरियन प्रायद्वीपका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरूमा निर्माणकर्ता र निर्देशक हुन्।
को साँझ अनुसूची को प्रस्तुतकर्ताको रूपमा सात चन्द्रमा एक पर्याप्त महत्वपूर्ण श्रोता खेती। टेलिभिजन कार्यको बारेमा, मोन्फोर्टे उनी स्क्रिप्टराइटर र एन्टिना,, TVE, ला २ र Telemadrid जस्ता नेटवर्कमा सहभागी थिए। आज उनी अखबारमा सहयोगी छिन् कारण. यस स्पेनिश पत्रकार र लेखकले सिर्जना गरेका पुस्तकहरू तल वर्णन गरिएको छ:
प्रेमको लागि बुर्का (2007)
प्रेमको लागि बुर्का।
एक साँचो कथा को शुरुवात
यो शीर्षक मारिया गलेराको प्रेसिंग परिस्थितिहरूको वरपरका वास्तविक घटनाहरूमा आधारित छ। मोनफोर्टेले यो जवान मल्लार्कनको कथा पत्ता लगाएका थिए जब उनले एक अखबारमा एउटा लेख पढेका थिए। पछि, तिनीहरूले रोजी (मारियाकी बहिनी) लाई सम्पर्क गरे जसले नायकको खोजी गर्न मद्दत गरे जबसम्म उनी अन्ततः उनको फोनमा कुराकानीको समयमा फोनमा बोल्न सक्षम भएनन्। सात चन्द्रमा.
यस सम्बन्धमा मोनफोर्टेले जेबी म्याकग्रीगोर (२०० 2007) सँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए:हामी मारियालाई काबुलको घरमा भेट्न सक्षम भयौं जहाँ उनी आफ्नो पतिसँगै बस्थे, उनका दुई साना बच्चाहरु र तेस्रो बच्चा जो बाटोमा थियो। र त्यहाँ यो सबै सुरु भयो। मारिया years बर्षदेखि बाँचिरहेकी दुःस्वप्नको पनि अन्त नै भयो।
मूलतः यो उपन्यास एक प्रेम कथा हो। यो एक युवती (मारिया गलेरा) को बारेमा छ जो लन्डनमा एक अफगानी मानिससँग प्रेममा परेकी थिई। उनको भावनाहरु यति तीव्रतामा पुगे कि उनले उनीसँग बिहे गर्ने, इस्लाम धर्म परिवर्तन गर्ने, र आफ्नो पतिलाई उनको जन्मको देश अनुसरण गर्ने निर्णय गरे। त्यहाँ उनी बाध्य भएर तालिबानी शासनको कडा नियममा रहे।
युद्धको सुरुमा वातावरण गम्भीर रूपमा बढेको थियो, किनकि उनी पहिचान वा पैसा बिना संघर्षको बीचमा फसेकी थिइन। यद्यपि, lऊ असुरक्षित जीवनको स्थितिले उनलाई उनको पतिसँग दुई बच्चा जन्माउन रोक्दैन। यद्यपि, तेस्रो बच्चासँगै, बाटोमा मारियाले सहयोगको लागि निर्णय गर्ने निर्णय गरे ... एउटा मल्लार्कन व्यापारीले आफ्नो हात समातेर उसको अचम्मको यात्रा बताउन बाँच्न सफल भयो।
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: क्रूर प्रेम
आफ्नो दोस्रो पुस्तक संग, Monforte एक साँचो मामला मा परिवार र प्रेम सम्बन्धित विषयहरु अन्वेषण जारी। यस अवसरमा, भालेन्सियाको नागरिक मारिया जोसे कार्रास्कोसा। उनी २०० 2006 देखि २०१ 2015 सम्म जेलमा परेकी थिइन (जुन वर्ष उनलाई प्यारोलमा रिहा गरिएको थियो), अपहेलना र अपहरणको आरोपमा १ 14 बर्षको जेल सजाय सुनाईयो।
क्यारास्कोसा आफ्नी छोरीसँग अमेरिकाबाट स्पेनको लागि आफ्नो बुबा पीटर इनेस (उजुरीकर्ता, एक अमेरिकी नागरिक) बाट अनुमति बिना यात्रा गरे। मानौं कि उनी अपमानजनक र दुर्व्यवहार गर्ने पति थिए जसका लागि मारिया होसेले घोषणा गरिन् कि उनले आफूलाई केटीबाट टाढा राख्ने आफ्नो इरादा कहिल्यै त्याग्ने छैन। यस पुस्तकले उनको कैदको खतरनाक परिस्थिति र उसको कानूनी प्रक्रियाको विवरण बयान गर्दछ।
लुकेको गुलाब (2009)
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: लुकेको गुलाब
मोनफोर्टेको तेस्रो पुस्तक पूर्ववर्ती शीर्षकहरूको प्रकाशन संख्या (दुई बीचमा तीन लाख भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्रि भएको) लाई अत्यधिक अनुमान गरिएको थियो। लुकेको गुलाब बोस्नियाको शरणार्थी जेहराको वास्तविक कथा बताइएको छ जो बाल्कनको युद्धबाट भागेर स्पेनमा आइपुगेको थियो। यद्यपि प्रायद्वीपमा उनको जीवन साहसका साथ कठिनाइहरूको सामना गर्नुपरे पक्कै पनि सजिलो छैन।
पछि जेहेराले माफिया, मानव तस्कर, क्सीनोफोबिक पूर्वाग्रह र बदलाको भंवरबाट पीडित हुनुपर्दछ जुन उनको विगतसँग सम्बन्धित छ। यी खतरनाक अवरोधहरूको सामना गर्दै, उनी आफ्नी दिदीसँगको बन्धनमा निर्भर छिन्। त्यस्तै गरी, स्पेनिस साथीको स्नेह जसले उनलाई चरमपंथीमा बचाउँदछ र नयाँ प्रेमको भ्रम महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: विश्वासघाती
यस पुस्तकमा त्यहाँ केही विषयगत समानताहरू छन् प्रेमको लागि बुर्का। भन्नुपर्दा, यो वास्तविक घटनाहरूमा आधारित कथन हो, एक स्पेनिश महिला (सारा) र मुस्लिम (नजीब) बीचको क्रस… त्यसो भए, नायकले (एक शिक्षक) विद्यार्थीको साँचो मनसाय फेला पारे पछि घटनाक्रमले एक अचम्म मोड लिन्छ।
यथार्थमा, नाजिब एक छुपाएको अल कायदा सेलको एक जिहादी हुन्। फलस्वरूप, उनी केवल आफ्नो संस्कृति र धार्मिक कट्टरपन्थीको लागि भावनात्मक रूपमा कमजोर महिलाहरूलाई आकर्षित गर्न मात्र पश्चिमी जीवनमा पूर्ण रूपमा एकीकृत भएको नाटक गर्दछन्। यस बीच सारालाई थाहा भयो कि त्यो षड्यन्त्रमा संलग्न भएको छ र उनी कट्टरपन्थी निर्णय गर्न बाध्य छन्।
बालुवा चुम्बन (2013)
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: बालुवा चुम्बन
बालुवा चुम्बन पश्चिमी सहारा मरुभूमिमा सेट गरिएको कथा हो र दुई युगमा लिन्छ। अहिले लाआ भन्ने सहारावी केटी जो केही वर्षदेखि स्पेनी इलाकामा बसिरहेकी छिन्। भविष्यको उत्साहका साथ हेर्दै पनि, उनले आफ्नो भाई अहमदको मूर्त रुपले अस्वाभाविक अतीत लुकाउँछिन्। जसले आफ्नो फिर्तीको माग गर्न प्रायद्वीपमा यात्रा गरे।
अर्कोतर्फ, कार्लोस - जुलियोका बुबा, लाइआको स्पेनी प्रेमी - उनका विशेष प्रेम सम्बन्ध दाजला (मॉरिटानिया) मा बिताउँथे। मोरोक्को सेनाको आक्रमण भन्दा पहिले (त्यो १ 1975 prior prior) त्यो एन्क्लेभलाई विला सिस्नेरोस पनि भनिन्थ्यो। यस सन्दर्भमा, मोनफोर्टेले सहारावी चलन र हार्टानिसको अवस्था वर्णन गर्दछ (हजारौं युवा मौरिटानियनहरूले भोग्नु परेको समकालीन दासत्व)।
एक रूसी जोश (2015)
एक रूसी जोश।
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: एक रूसी जोश
यो शीर्षक प्रतिनिधित्व गर्दछ, आज सम्म रेस मोन्फोर्टेको सबैभन्दा उत्कृष्ट साहित्यिक रचना। छ ऐतिहासिक उपन्यास dयसले अद्भुत कलात्मक क्यारियर र म्याड्रिड गायिका लीना कोडिना (१ 1897 1989 - - १ XNUMX XNUMX)) को जीवनमा न्यूरोल्जिक जीवनी घटनाहरूको विवरण दिन्छ। उनी प्रशंसित मस्को पियानोवादक, रचनाकार, र कन्डक्टर सर्गेई एस प्रोकोफिएव (१v 1891 १ - १ 1953 XNUMX) को पहिलो पत्नी र म्यूज थिए।
कथा पेरिस मा प्रोकोफिभ विवाह को पहिलो खुशीयाली वर्षहरु देखाउँदछ। त्यहाँ, दम्पतीले आफ्ना समयका सबैभन्दा नवीन बौद्धिक तथा कलाकारहरूको काँधमा मलह्यो (१ 1930 s० को दशक)। त्यसपछि सेर्गेई आफ्नो परिवारको साथ मस्को फर्कने निर्णय गरे। जहाँ - जब उनीहरू पहिलो पटक सम्मानका साथ प्राप्त भए पनि - स्टालिन शासनले उनीहरूलाई सताउन थाल्यो।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर, मीरा मेंडेल्सोहनसँग सर्गेईको विवाहबाहक सम्बन्धको कारण विवाह बिग्रियो। छुट्टिए पछि उनलाई कम्युनिष्टहरूले गलत आरोप लगाए र स्टालिनको मृत्यु नहोउन्जेल गुलागमा पठाइयो (१ sent 1978)। यसैले, एक रूसी जोश प्रेम, वेदना र अद्वितीय महिलाको बाँच्नको एक अविश्वसनीय कहानी हो।
रेस मोन्फोर्टेको सबैभन्दा भर्खरका पुस्तकहरू
व्यावसायिक सफलता र अनुकूल साहित्यिक समीक्षा द्वारा प्राप्त एक रूसी जोश तिनीहरूले धेरै आशा उत्पन्न गरे मोनफोर्टेको अर्को रिलीजको वरिपरि, ल्याभेन्डर को स्मृति (२०१))। पक्कै पनि, यस उपन्यासले केही असन्तुष्ट आवाजहरूको साथसाथै बहुमत सकारात्मक समीक्षाहरू प्राप्त गर्‍यो।
अन्ततः, con पूर्वबाट पोष्टकार्डहरू (२०२०) म्याड्रिडबाट जन्मेका लेखक शैलीमा फर्केर आएकी छन् यस असाधारण कहानी ए मा सेट गरेकोमा नाजी यातना शिविर. नाटकमा, वास्तविक चरित्रका साथै अन्य आविष्कार भएका व्यक्तिहरूले मध्यवर्ती कथन थ्रेड सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन् जुन अस्विट्जको त्रासलाई सम्झन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » रेज मोन्फोर्टे पुस्तकहरू
नदत एल हाचमी, नडाल पुरस्कारका लागि विजेता उनीहरू सोमबार हामीलाई माया गर्नेछन्